Maxkamadda gobolka Banaadir oo 10 sano oo xabsi ah ku riday Agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga – Radio Damal
Maxkamada darajada koowaad ee gobolka Banaadir ayaa maanta toban sano oo xabsi ah iyo ganaax dhan $2,366, ku riday Agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda Soomaaliya, Guuleed Maxamed Ibraahim.
Maxkamadu waxay masuulkaan ku heshay inuu lunsaday lacag dhan $137,907 waxayna amar ku bixisay inuu lacagtaas kusoo celiyo qasnada dowladda sidoo kalena waxay ka mamnuucday inuu xafiis dambe oo dowladdeed maamulo.
Maxkamada gobolka Banaadir waxay sidoo kale 9 sano oo xabsi ah ku riday Cali Sheikkdoon Cabdi oo ahaa madaxa hubinta xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federalka ahna mulkilaha shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Maamuus.
Sarkalkaan ayaa lagu helay xatooyo hantida dadweynaha iyo ku daneysiga xafiis dowladdeed ee uu ka howlgalayay, waxayna maxkamadu sidoo kale ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan $58,505 uuna bixiyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 malyan oo shilinka Soomaaliga ah, waxay maxkamadu ka reebtay inuu shaqo dambe oo dowladdeed qabto.
Uways Xasan Cumar iyo wiilkiisa Khadar Uways Xasan oo lagu helay ku daneysi xafiis dowladdeed iyo xatooyo, ayaa lagu riday xukuno kala duwan. Maxkamadu waxay Uways ku riday hal sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax dhan $1,183.
Halka wiilkiisa oo maamule ka ah shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Xabiib ay ku riday saddex 3 sano oo xabsi ah iyo $1,183 ganaax ah
Dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale maxkamada gobolka Banaadir ay xukuno ku riday masuuliyiin katirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kadib markii lagu helay musuq maasuq.